Shiinaha 101.6mm Length Waterjet Abrasive Nozzles Waterjet Abrasive Nozzle waa mid ka mid ah waxyaabaha wax lagu cuno ee mashiinnada goynta biyaha. soo -saareyaasha iyo alaab -qeybiyeyaasha | Xinhua
101.6mm Length Waterjet Abrasive Nozzles Waterjet Abrasive Nozzle waa mid ka mid ah waxyaabaha wax lagu cuno ee mashiinnada goynta biyaha.
Tuubooyinka isku dhafka ah ee shirkadeena waxaa soo saaray koox kooxo xirfadlayaal ah muddo ku dhow 10 sano. Waxay leedahay astaamaha iska caabinta xirashada sare iyo nolosha adeegga dheer. Celceliska nolosha adeeggu wuxuu gaari karaa 120 saacadood.
Iyaga dhexdooda, tikniyoolajiyadda carbide -ka ee tungsten -ka gaarka ah ee shirkadeena oo lagu dabaqay biiyaha wax qarxa ee jet -ka ayaa hadda ah hoggaamiyaha warshadaha.
Nozzle Water Abet Abrasive Nozzle waa mid ka mid ah waxyaabaha lagu isticmaalo mashiinnada goynta biyaha.
Tilmaamaha nozzles -ka biyaha ee aan soo saarnay ayaa gabi ahaanba ku habboon qalabyada biyaha ee caadiga ah ee shisheeyaha, sida DUUB, OMAX iwm
Nozzles -ka biyuhu waxay ka samaysan yihiin alaab carbide tungsten carbide (BLTC) oo adkaysi u leh. Waxaan isticmaalnaa nano-walxaha qaaliga ah ee budada bikrada ah ee WC waxaanna ku xoojineynaa heerkulka sare oo leh xaalado si sax ah loo kontoroolo. Maaddadu waxay leedahay Vicker's hardness HV1 oo ka badan 2700. Waxaan markaa u isticmaalnaa siligga EDM si aan u samayno daloolka dhexe iyo xawaaraha hoose ee WEDM si aan u dhammaynno daloolka dhexe si aan ugu qeexno heerka micron ee saxnaanta. Dhammaadka dusha waxaa lagu xakameeyaa Ra 0.8 oo ka hooseeya tallaabooyin badan oo ah EDM xawaare hooseysa.
OD (mm) Aqoonsiga (mm) Dhererka (mm) EE MAKIINADDA BIYAHA
7.14 0.76 101.6 DUQA QAACIGA
7.14 1.02 101.6 DUQA QAACIGA
8.0 0.76 101.6 Nozzles OMAX
8.0 1.02 101.6 Nozzles OMAX
Is -habeynta waa la heli karaa. Haddii aad u baahan tahay cabbirro kale, fadlan si xor ah nala soo xiriir.
Faa'iidooyinka goynta diyaaradda biyaha, tikniyoolajiyadda jarista biyaha ee cadaadiska sare leh, marka la barbardhigo hababka goynta dhaqanka, goynta qabow ma beddeleyso sifooyinka jirka iyo kiimikada ee maaddada. Biyaha cadaadiska sare leh waxaa lagu qaso ciid garnet, emery iyo abrasives kale si ay u caawiso goynta, taas oo si weyn u hagaajinaysa xawaaraha goynta iyo dhumucda goynta ee biyaha biyaha. Goynta diyaaradda biyaha ayaa si weyn loogu isticmaalay goynta dhoobada, jarista dhagaxa, galaaska iyo bir -goynta, jaridda walxaha isku dhafan iyo warshado kale oo badan. Waqtigan xaadirka ah, waxaa suuqa ugu badan 3-dhidib, 4-dhidib-biyood iyo 5-dhidibka qalabka biyaha.
Hore: 76.2mm Length Waterjet Abrasive Nozzles Water Jet Nozzle waa mid ka mid ah waxyaabaha wax lagu cuno ee mashiinnada goynta biyaha
Xiga: Ulaha Carbide ee dhulka ku yaal
nozzles biyo -mareenka abrasive
Diyaaradda Biyaha Shiinaha
Tubooyinka Xooga Leh
Cadaadis Sare Diyaaradda Biyaha
Biyaha Jet Abrasive Nozzles
Biyaha Jet Biyaha
Biiyaha Goynta Biyaha
Nozzles Mixing Waterjet
Tube Qasaynta Biyaha Waterjet
Qaybaha Dayactirka ee Waterjet
330mm Dhererka Sibidhka Carbide Rods Product Des ...